Khabiirka Cilmi-baarista ayaa sharraxaya waxa isbedelka ku yimid qaab-dhismeedka Webka
Wershadaha naqshadeynta webka ayaa la kulmay isbeddel weyn, isbedelisbeddellada ku habboonaa sannadka 2016. Ma jiro wax la yaab leh in macaamiisha badan ay raadinayaan noocyada ugu dambeeyay ee alaabooyinka,Iskuduwidda waxqabadka sare. Sidaa daraadeed, isbeddellada 2016-ka waxay noqdeen kuwo gaboobay sannadkii 2017.
shan iyo toban sano ka hor, asalka gaajada iyo GIF animated ah ee horebogga ayaa sida caadiga ah loo adeegsaday - fuchai 200watt. Si kastaba ha ahaatee, dareenadani waa la eryey kadib markii macaamiishu aanay ka faa'iideysan karin xalalkaas.Xadgudubka suurtagalka ah ee khayraadka naqshadda webka si xun u saameeya waxqabadka ganacsiga. Tusaale ahaan, ganacsiyada lehbilowday bilawga ah ee asalka mugdiga ah ma gaari doono yoolalka ay ka midka yihiin isbeddelka tirada iyo tirada la door bidayliiska.
Xaalado badan, iska diidista dareenka naqshadaha shabakada looma hayo. Khabiirka hoggaanka u ah Sare Adeegyada Digital, Max Bell waxay bixisaa liis ay ku socdaan isbeddellada naqshadaha websaydhka iyo jaangooyooyinka, kuwaas oo ku saabsan in laga eryo naqshadeeyayaasha websaydhka.Si kastaba ha noqotee, farsamooyinkaan waa la qaban karaa si loo isticmaalo xilliga kooraska.
foomamka ku-qorista oo la socda tafaariiq
Foomamka ku-qorista ayaa ka caawiya dadka soo booqda inay ku biiraan boggaaga, taas oo kordhisasicirka bedelka..Isticmaal foomamka sahlan si aad isaga ilaalisid inaad soo booqdaan. Intaa waxaa dheer, tixgeli inaad weydiisatid macluumaad muhiim ah kaliya. TheIsticmaalka foomamka rukunka ee fududeynaya in la fahmo oo la sahlanaado in la buuxiyo ayaa ah mid xooggan, hase yeeshee waxaa laga yaabaa in laga saaro tansanadka sababtoo ah soo ifbaxa naqshadda webka
Isku-dubbarididda macluumaadka ugu badan ee boggaaga soo dega ayaa lagula talinayaasi loo soo jiito dareenka martidaada. Interface waa inaad leedahay sharrax cad oo ku saabsan waxyaabaha aad ka kooban tahay. Dhawaanahanisweydaarsigu wuxuu u eg yahay inuu yahay mid yar.
Warshadaha naqshadeynta webka, pop-ups ayaa badiyaa loo isticmaalaa si kor loogu qaado nuxurka iyosi loo muujiyo macluumaad taxane ah. Pop-ups waxay leeyihiin heerar hooseeya marka loo eego dhibta. Waxaad go'aansan kartaa inaad noqotopop-ups ga gaar ah iyo dhexdhexaad ah. Laakiin pop-ups ayaa laga yaabaa inay suuqa ka baxaan sanadkan iyo sidoo kale dareenka kale ee design webka soo bandhigaysuuqa. Calaamaduhu waa in la xajiyaa marka laga yaabo inay u adeegaan ujeedooyin kale mustaqbalka.
Warqadaha bogagga hore
In la sameeyo qaab-dhismeed fudud oo ku yaal boggaaga ayaa had iyo jeer fikrad wanaagsan.Booqdeyaasha isticmaalaya qalabyada mobile waxay la kulmaan dhibaatooyin badan markaad isku deyeyso inay ku soo maraan bogagga bogagga. Inta badankiisaska, ma aha bogga ugu horeeya ee ku jira macluumaadka ugu muhiimsan.
Isbedelada naqshadeynta websaydhka badanaa waxay ku saabsanaayaan sanadkan. Naqshadeynta Webkaisbeddellada waa in lagu hayaa meel heysta maadaama ay dhici karto inaan fursad u helno inaan si haboon u isticmaalno oo aan uga faa'iideysano tabahaas.